Su'aal: Maxaa sababa baso xanuunka?
Author Topic: Su'aal: Maxaa sababa baso xanuunka? (Read 42421 times)
« on: January 23, 2019, 01:09:48 PM »
Asc dictore marka hore wan idinkaga mahadcilina u adegida sahaln e bulasha somaliyed
Marka xigta waxan rabaa inan kuweydiyo basa xnuunka maxaa sababa maxan lagu daweyn karaa waxa jirto in kugta ama basada sida lo yaqano in ay ixanuneyso ama qaab kubasho ama hur camal an daremo markasta MAHADSANID
Re: Su'aal: Maxaa sababa baso xanuunka?
« Reply #1 on: October 13, 2019, 12:24:19 PM »
Basada oo ku danqato, hanbabto ama ku xanuunto, mararka qaarne aad tinta shallaysan wayso waxay tilmaan u tahay arrimo dhowr ah oo ay ka mid yihiin in qulqulka dhiigga basada uu yar yahay, in madax xanuunka kacsanaanta uu jiro "tension headahce" oo salka ku haayo welwelka iyo diiqada, sidoo kale in xanuun timaha uu jiro, marka si loo kala ogaado waxa ay tahay waxaa haboon in lagu arko.
Haddii cilladaasi ay muddo kooban ku haysay, kadibne aad ka fiicnaatay waxay u badan tahay inuu madax xanuunkaasi uu ahaa, welwelne ku haystay, Allane kaa dul qaaday, laakiin hadduu xanuunka sii socdo, cuncunne aad dareentid waa qasab inaad dhakhtar tustid.
Views: 124112 August 23, 2015, 02:14:13 PM
Views: 18867 June 11, 2017, 12:22:58 PM